सरकारी जागिरको प्रलोभन देखाइ ४५ लाख ठगेर नेकपाका नगर अध्यक्ष गायब! |
सरकारी जागिरको प्रलोभन देखाइ ४५ लाख ठगेर नेकपाका नगर अध्यक्ष गायब!
On: २०७६ भाद्र ५ गते, बिहीबार, ०३:३३ बजे प्रकाशित
काठमाडौं। कपिलवस्तु वाणगंगा नगरपालिकाका सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का नगर अध्यक्षलाई ठगीको आरोप लागेको छ।
आफ्नै पार्टी निकट युवाहरुसँग सरकारी जागिरको प्रलोभन देखाउँदै अध्यक्ष विश्व कार्कीले ४५ लाखभन्दा बढी रकम असुलेको कुरा बाहिर आएको छ।
नेपाल प्रहरी, शिक्षा सेवा आयोग, स्वास्थ्य सेवालगायतमा जागिर लगाइदिने भनी रकम असुल्ने अध्यक्ष कार्की अहिले भने सम्पर्कबिहीन रहेका बताइएको छ।
गत साउन ३२ गते गुल्मी र बाग्लुङका एक दर्जन युवाहरुले आफूलाई कार्कीले ठगेको भन्दै रकम फिर्ता गराइदिन नेकपा जिल्ला कार्यसमितिमा सामूहिक निवेदन दिएका थिए।
सोही निवेदन सार्वजनिक भएपछि कार्कीले ठगेको कुरा बाहिर आएको थियो। शिक्षा सेवाका लागि ४ लाख ५० हजार, स्वास्थ्यका लागि ३ लाख र प्रहरीका लागि २ लाख ६० हजारका दरले रकम लिएको पीडितहरुले बताए।
७ जना शिक्षा सेवा आयोग, २ जना स्वास्थ्य र ३ जनाले प्रहरी बन्नका लागि कार्कीलाई रकम बुझाएका थिए। उनले ग्यारेन्टीका साथ जागिर लगाइदिने र केन्द्रीय स्तरका कर्मचारी र नेताहरुलाई रकम बुझाउन पर्ने भन्दै रकम लिएका थिए।
निवेदनमा शिक्षक बन्न गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाका तारा बहादुर थापा, तेजेन्दै घर्ती, दिपेन्द्र घर्ती, कुती श्रीस, रुद्र्र बहादुर पुन, बाग्लुङको बडिगाउ गाउँपालिकाको पूर्णबहादुर विश्वकर्मा र श्याम घर्तीले साढे चार लाखका दरले रकम बुझाएको उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै प्रहरी बन्न बाग्लुङका नर बहादुर विश्वकर्मा, गंगाराम विश्वकर्मा र मनोज रसाइलीले ३/३ लाखका दरले रकम दिएका थिए। स्वास्थ्यका लागि गुल्मीका जीतच बहादुर सुनार र पदम थापाले २ लाख ६० हजारका दरले बुझाएका थिए।
अन्य सम्बन्धित समाचार: क्रिकेटर भण्डारीको शल्यक्रिया सफल
उनीहरुले पैसा बुझाएपछि आफ्नो नाम पक्कै आउँछ भन्ने भएपनि नतिजामा आफ्नो नाम नआएको बताए। नेकपाका एक जिल्लास्तरीय नेताका अनुसार उनी पहिल्यैदेखि यस्तो काम गर्ने गर्थे। उनको घरमा पुग्दा उनी नभएको र परिवारहरुले पनि कार्कीबारे कुनै जानकारी नभएको बताएका छन्।
पार्टी जिल्ला अध्यक्ष छवि पोखरेलका अनुसार अहिले उनी सम्पर्कमा छैनन्। उनले सम्पर्कमा आएपछि दोषी भेटिए पार्टीले अनुशासनको कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
२०७६ भाद्र ५ गते, बिहीबार, ०३:३३ बजे प्रकाशित